Vaovao - Ny fampahalalana amin'ny ho avy ny fitsaboana veterinera
Ny fampahalalana amin'ny ho avy ny fanafody veterinera
Amin'izao fotoana izao, ny indostrian'ny fiompiana anaty rano eto amintsika dia mihetsika amin'ny làlan'ny fandanjalanjana sy ny refy. Ny tantsaha nentim-paharazana dia miditra amin'ny kaoperativa matihanina. Miaraka amin'ny fampivoarana ny tsena, ny varotra sy ny fampiasana zava-mahadomelina dia nanomboka niova vitsivitsy, izay nanomboka nisy fiatraikany tamin'ny famokarana sy ny varotra fonosana tavoahangy fanafody veterinary.
Voalohany, ny fonosana tavoahangy fanafody veterinary dia mila famolavolana sy fivoarana matihanina. Tsy lasibatra ny fonosana tavoahangy fanafody nentim-paharazana, ary vitsy ny mpamokatra novolavola ho an'ny tsenan'ny tavoahangy zava-mahadomelina. Ankehitriny, miaraka amin'ny fiovana eo amin'ny tsenan'ny zava-mahadomelina, ny fiompiana matihanina marobe dia mitaky fampiroboroboana ny tavoahangy fanafody veterinera mba hifanaraka amin'ny tsena. Faharoa, ny fironana amin'ny fahaizan'ny tavoahangy fanafody veterinera mankany amin'ny fiovana lehibe. Ireo tantsaha nentim-paharazana dia manana ambaratonga kely, kolontsaina kely ary zava-mahadomelina bitika vitsivitsy. Na izany aza, ny tantsaha midadasika dia mampiasa famokarana mavitrika ary mila tavoahangy fitsaboana veterinera manana fahaizana lehibe hamaly ny filan'izy ireo.
Ny fonosana tavoahangy fanafody veterinary dia hiatrika mpiompy matihanina amin'ny ho avy, ary afaka miasa mafy amin'ny lafiny fandrindrana ny fampahalalam-baovao mba hampiroborobo ny indostrian'ny fitsaboana veterinera manontolo.